စန်းဦး (M.S.O.) - ဝီကီပီးဒီးယား
စန်းဦး (M.S.O.) (၁၉၆၄) (ဝဲ) နဲ့ သူ့လက်ရာ ပန်းချီကား တချပ်။
စန်းဦး (M.S.O.)သည် စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်တိုက်ကို တည်ထောင်သူဖြစ်သည်။ ကဗျာများနှင့် စာအုပ် မျက်နှာဖုံး ဒီဇိုင်းများ ဖန်တီးသူ အဖြစ် လူသိများရာက ၂၀၀၄ ခုနှစ်၊ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ပန်းချီ တကိုယ်တော် ပြပွဲကြီး တပွဲ ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာ ခင်းကျင်း ပြသကာ မြန်မာ အနုပညာ နယ်ပယ်က အံ့အားသင့် အသိအမှတ် ပြု ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။
စန်းဦး (M.S.O.) သည် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြန်အောင်မြို့နယ်၊ ကနောင်မြို့၌ အဖ ဦးကျောက်၊ အမိ ဒေါ်အေးစိန်တို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ တဦးတည်းသောသား၊ အမည်ရင်း စန်းဦး ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်က ကနောင်မြို့၊ မူလတန်းကျောင်းတွင် မူလတန်းမှ စတုတ္ထတန်း အထိ လည်းကောင်း၊ ကနောင်မြို့ အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပဉ္စမတန်းမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အထိ လည်းကောင်း ပညာသင်ကြားခဲ့သည်။ ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် ဟင်္သာတ ဒေသကောလိပ်၊ နောက် ရန်ကုန် စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်တို့တွင် ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး၊ B.Econ. (Eco.) ဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝ ၁၉၈ဝ ဝန်းကျင်တွင် ဆရာ ဦးလွန်းကယ်ထံမှ ပန်းချီပညာ သင်ယူဖူးပြီး၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းမဂ္ဂဇင်တွေမှာ ၁၉၈၁ လောက်ကတည်းက သရုပ်ဖော် ပန်းချီ စတင် ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ကျောင်းသား ဘဝကတည်းက စုပေါင်း ပန်းချီ ပြပွဲပေါင်း များစွာနှင့် ကံ့ကော်ရွာ ပန်းချီ ပြပွဲပေါင်း များစွာတွင် ပါဝင် ပြသခဲ့ဖူးသူလည်း ဖြစ်သည်။
ဟင်္သတ ဒေသကောလိပ် ကျောင်းသား ဘဝမှာပင် ၁၉၈၂ ခုနှစ်ထုတ် ဟင်္သတ ဒေသကောလိပ် နှစ်ပတ်လည် မဂ္ဂဇင်းတွင် 'အချစ်နောက်ဆက်တွဲ ခြားနားချက် ဒိုင်ယာရီ စာမျက်နှာများ' ဝတ္ထုတိုကို စတင်ရေးသား ဖော်ပြခံရသည်။ နောက် ဒဂုန် မဂ္ဂဇင်း၊ မိုးဝေ မဂ္ဂဇင်း၊ ဟန်သစ် မဂ္ဂဇင်း၊ ရသအောင်မြေ မဂ္ဂဇင်းများတွင် ကဗျာ၊ ဝတ္ထုတိုများ ရေးသားခဲ့သည်။ မိုးဝေ စာပေမဂ္ဂဇင်းမှ 'ရောဂါသည် မုန်တိုင်း' ဟီရိုရှီးမား အမှတ်တရ ကဗျာရှည်သည် လည်းကောင်း၊ သရဖူ မဂ္ဂဇင်းမှ 'နာနာဘဝ မော်တော်ကား' မဂ္ဂဇင်း ဝတ္ထုရှည်သည် လည်းကောင်း ထင်ရှား အောင်မြင်ခဲ့သည်။
ပထမဆုံး ကဗျာ စာအုပ်အဖြစ် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် 'မိုးရာသီဆက်တင် ကဗျာစီစဉ်မှု' ကဗျာစာအုပ်၊ ၂ဝဝဝ ခုနှစ်တွင် 'နာနာဘဝ မော်တော်ကား' (ဝတ္ထုလတ်)၊ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် 'ပန်းခြံပြဇာတ်၊ ဖဲချပ်နဲ့ ဘူးခွံ' (ဝတ္ထုလုံးချင်း) များ ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အခြား ကဗျာဆရာများနှင့် တွဲဖက်၍ ကဗျာ စာအုပ်များလည်း ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အခြားတဖက်တွင် ပန်းချီ ရေးဆွဲခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရင်း ကံ့ကော်ရွာ ပန်းချီပြပွဲများတွင် ပါဝင် ပြသခဲ့သည်။
၁၉၉၇ မှာ ရန်ကုန်ကို ပြောင်းရွှေ့ အခြေချ နေထိုင်ပြီး၊ စိတ်ကူးချိုချိုစာပေတိုက် ထူထောင်ကာ စာအုပ် ၃၀ဝ ကျော် ထုတ်ဝေထားပြီး ဖြစ်သည်။ စိတ်ကူးချိုချို စာအုပ်တိုက်သည် စာပေ၊ အနုပညာနှင့် အသိပညာ ဆိုင်ရာ စာအုပ် စာတမ်းများကို သေသေသပ်သပ် ထုတ်ဝေနေသော စာအုပ်တိုက် တတိုက်လည်း ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် မော်ဒန်ကဗျာ၊ မော်ဒန် ဝတ္ထုများ၊ မော်ဒန် ပန်းချီကားများဖြင့် စာပေ အနုပညာရှင် တယောက်အဖြစ် နေထိုင်ရင်း ရနံ့သစ် မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ အဖွဲ့ဝင်၊ ထို့နောက် အားကစား ဂျာနယ်များ၊ စာဖတ်သူ ဂျာနယ်၊ အောင်နိမိတ် ဂျာနယ်၊ Educator ဂျာနယ်များ ဦးစီး ထုတ်ဝေလျက် ရှိသည်။
ယခုအခါ စန်းဦးသည် ရန်ကုန်မြို့၊ တာမွေမြို့နယ်တွင် ဇနီး ဒေါ်ဝင်းမာ၊ သား အောင်စည်သာ တို့နှင့်အတူ နေထိုင်လျက် ရှိသည်။
↑ ရနံ့သစ် မဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ် (၉)၊ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၉ ထုတ်မှ
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စန်းဦး_(M.S.O.)&oldid=350063" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၄ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၇၊ ၀၄:၀၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။